I-APICMO Umvelisi wezoMveliso weeMveliso zeCMO / CDMO Intermediates
Ukuveliswa kwamanqaku amancinci kunye nokukhutshwa kombhobho
I-APICMO isebenzi yee-milligrams oda ukuya kwiitoni zobuninzi bemveliso
APICMO umgangatho wenkonzo
sizinikezele kumgangatho ophezulu kunye neemfuno zokuvelisa i-cGMP zeemveliso ukuqinisekisa ukuba iinkonzo kunye neemveliso ziyahlangabezana neemigangatho eziphezulu.
I-APICMO inkampani yezobisi ephuhlisa iziphambili eziphambili zamachiza amatsha. Ijolise ekunikezeni inkqubo epheleleyo yokwenziwa komsebenzi kunye nolungelelweyo ngezixhobo zophando lweziyobisi kunye nee-arhente zophuhliso kunye neenkampani zonyango.
I-APICMO ineqela elinamandla le-R & D kunye nososayensi abanamava - uDkt. JACK. Sinesityalo esikhulu sokwenza imveliso kunye neqela lolawulo lophuhliso loshishino. Amalungu olawulo lweqela le-APICMO amaninzi avela kumazwe athuthukileyo afana ne-United States, iYurophu kunye neJapan. Ngaphezulu kwe-10 iminyaka yamava emashishini kwiinkampani zamayeza ngamazwe ngamazwe. Emva kweminyaka engaphezu kweyishumi yokuqokelela kweemarike, i-APICMO inesiseko esibanzi sentsebenziswano kwi-industry intermediates industry.
IINKONZO ZASE APICMO
I-APICMO inikeza iinkonzo ezinxulumene nazo ezixhaswe yimigaqo yethu eqinile kwi-Intellectual Property (IP) ukukhusela, ukuqinisekisa ukuba iiprojekthi zisingathwa kwiimeko eziyimfihlo kakhulu.
Kwiminyaka edluleyo, i-APICMO ibonelela ngeenkonzo ezenziwe ngokukodwa kunye nokwenziwa kweenkonzo. Inkonzo yethu isuka kwibhulagram encinci ye-milligram ukuya kwiitoni zenkonzo enkulu yokuvelisa.
I-APICMO yeDiscovery Discovery iyisisombululo senkqubela esekelwe kwifu, esichaza ulwazi lwesayensi kunye nedatha ukutyhila ukungaziwa okungaziwa kunye nokufihlakeleyo okunokukunceda ukwandisa amathuba okwenzululwazi.
Iqela lethu lophuhliso lwamakhemikhali, elinamaqela ososayensi angama-50 eChina, anaphezulu kwezinto ezilindelekileyo kuneeprojekthi ezininzi ezicelomngeni, sebenze kwii-laboratories zeseburhulumenteni ezixhotywe yinkqubo yakutshanje kunye nezixhobo zokuhlalutya.
Sithembelwa yiiNkampani eziPhambili zeHlabathi
2016. IIMISEBENZI NGAMABHARATORI AMANQAKU
2018. UMPHAKATHI OLAWULO
Uluhlu lweenkonzo: ukusuka kuma-milligram ukuya kumawaka eekhigram. Sineqela elixhamlayo lamalungu e-10, abalawula imarike jikelele, uphando kwiindidi zemveliso ezahlukahlukeneyo kunye nabathengisi baseTshayina, iinkcazo zemveliso, njl.
06 / 05 / 20190 azithandayo
08 / 30 / 20180 azithandayo
08 / 28 / 20180 azithandayo
08 / 18 / 20180 azithandayo
07 / 19 / 20181 Comment0 azithandayo
07 / 18 / 20181 Comment0 azithandayo
07 / 18 / 20182 Comments0 azithandayo
I-Best Winner Award